5 WWE Superstars nasandratry ny mpitantana azy ireo - Wwe
5 WWE Superstars izay nasandratry ny mpitantana azy ireo
Nisy fotoana iray izay nanampian'ireo tian'i Kapiteny Lou Albano sy Freddie Blassie tsiro tsy manam-paharoa tamin'ny fampisehoana ny WWE Superstars. Matetika ny mpitantana dia mitarika ny fizarana ady amin'ny mpanao tolona ary miditra amin'ny fifanolanana miaraka amina zazakely ambony.
Tamin'ny taona 1980, ny fianakaviana Heenan, notarihin'i Bobby Heenan, angano, dia teo amin'ny fahavalon'i Hulk Hogan lehibe indrindra. Ny 'The Brain' aza dia nitantana ny Mpanjaka Kong Buddy sy Andre The Giant tamin'ny lalao WrestleMania nifanaovany tamin'i Hogan.
Na izany aza, nandritra ny taonjato faha-21, nanala tsimoramora ny mpitantana ny vokariny i Vince McMahon. Fahadisoana izany satria afaka manafina ny kileman'ireo mpanakanto sasany ny mpitantana, indrindra amin'ny microphone, ary mametraka azy ireo amin'ny ambaratonga avo kokoa.
Aza ferana ny Promo azafady #GOAT status to just #sportsentertainment / #tolona .
Izaho no mpandahateny lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny karazan'aina velona eto amin'ity planeta ity na amin'ny planeta hafa.
Ary ... ny tsara indrindra ... Manetry tena aho amin'izany! @WWE @WWENetwork @peacockTV @FOXTV @RomanRoyals https://t.co/BKoHGn1o63
- Paul Heyman (@HeymanHustle) 20 aprily 2021
Ny sanda nateraky ny fisian'i Paul Heyman teo amin'ny efijery dia nahatonga an'i McMahon hiova hevitra tato ho ato, ary nanjary fitsanganana amin'ny maty kely ho an'ireo mpitantana ao amin'ny WWE.
Ireto misy Superstars WWE dimy izay nasandratry ny mpitantana azy ireo:
# 5. Zelina Vega dia nanampy an'i Andrade hahita ny diany WWE NXT
Taorian'ny firoboroboany tao amin'ny CMLL sy NJPW satria La Sombra - luchador nisaron-tava - dia niaina fiandohana sarotra i Andrade tao amin'ny WWE NXT. Ny tsy fahaizany manapaka promos amin'ny teny anglisy dia nanakana azy ary dia navela tampoka teo am-pelatanany izy.
Na izany aza, nahita ny fananany nihodina tamin'ny 2017 i 'El Idolo' rehefa nivadika voditongotra izy ary nanao fifanarahana tamin'i Zelina Vega. Ny fisian'i Vega sy ny laharany amin'ny mikrô dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fametrahana an'i Andrade ho iray amin'ireo asa tsara indrindra amin'ny WWE rehetra.
Andrade dia nandresy ny orinasa tiako Drew McIntyre ho an'ny Championship NXT tamin'ny seho NXT Takeover voalohany: Wargames. Ny fanjakany niaraka tamin'ny anaram-boninahitra dia nahitana ady tsy hay hadinoina niaraka tamin'i Johnny Gargano izay nasongadin'ny lalao kintana 5 tao amin'ny NXT Takeover: Philadelphia.
niara-nifindra tamina vehivavy hafa ny lehilahy
fahatsapana fa tsy hahita fitiavana intsony ianao
ahoana ny fomba hanaovana resaka
zavatra tokony hatao rehefa lisitra mankaleo anao
colin jost net mendrika 2020
tsy mandefa sms mihintsy izy fa mamaly foana